Waxaad tahay qof adventurous ama waxaa laga yaabaa in qof shaqaale ah oo ku mashquulsan oo u baahan in ay u guuraan inta badan in ay meelo badan oo la yaqaan ama aan la aqoon. Sida aad heysato aalad Android, waxaad u baahan tahay qaar ka mid ah maps & app navigation si loo soo dajiyo telefoonka Android aad la jecel yahay guuleysteen inay welwelkaaga in.
Laakiin idinka mid ah oo dhan Chine ee internet kuwa laga yaabo in wax fikrad ah kama map iyo navigation ka app ugu wanaagsan in kastoo aad u baahan tahay mid aad u xun. Nasiib wanaag waxaad u timaadeen inaad meel sax ah. Si aad welwelka aad ka baaba'aan, kaliya aad u baahan tahay in samir iyo hubi daraysid oo ka mid ah barnaamijyadooda map sare si ay u helaan meel walba oo aad rabto inaad aado.
Waxaan ka hadli doonaa qaar ka mid ah barnaamijyadooda map halkan, laakiin sida aan ka hadleynaa android, waxa aannu ka fikiraynaa 'Google Maps' tababare u ahaa oo dhan laga daadiyo map. Sidaas, waxaan bilaabi doonaa Google Maps.
Qaybta 1. Waa maxay Google Maps kuu sameeyo
Qaybta 2. Sida loo sameeyo Google Maps Available offline
Qaybta 3. Top 5 lagu bedelan karo Maps soo bixi, waayo, Android
Qaybta 4. Download / rakibi / uninstall / Share / Dhoofinta Google Maps iyo Alternative Apps hal meel
Waxaa sugan in sababo badan, waa map-app ugu wanaagsan ee Android. Dhab ahaantii waxaa magaceeda la 'Maps', laakiin si kastaba ha ahaatee waa loo jecel yahay magaca - Google Maps. Waxaad ka heli doontaa dhisay-in ku hindisooyin badan Android. Waxaa laga yaabaa in ay tahay app map ugu caansan & loo isticmaalo Adduun. Xitaa Apple waxaa lagula talinayaa in ay badal u tahay in ay nidaamka khariirada u gaar ah. Waxay leedahay celcelis ahaan Google Play Store rating ee 4.3 xiddigaha, oo ka mid ah ay suuragal tahay 5 ka 2.611.941 muraajiceeyey. Waxaa jira Updates joogto ah ka Google waa in, sidaas darteed waxaa hagaajinta maalin & Google waa ku daray qaababka cusub oo dheeraad ah updates kasta. Waxaa jira waxyaalo badan oo ay app this. Bal aynu eegno ah in qaar ka mid ah.
Maps Reliable & sax ah 220 dal & gobolada.
Hababka kala duwan ee navigation (tusaale ahaan baaskiilka, socodka, gaadiidka dadweynaha, gaari wadidda).
U ogolow Voice-ka lagu hago navigation GPS u socodka, baaskiilka, iyo wadida.
Tilmaamaha Transit iyo maps in ka badan 15,000 oo magaalooyinka iyo tuulooyinka.
Xaaladaha gaadiidka Live, leexashada si toos ah iyo warar dhacdada si ay u caawiyaan si aad u ogaato wadada ugu fiican.
Siiyaan macluumaad faahfaahsan oo muddo ka badan 100.000.000 meelaha.
Bixiya Street View iyo sawirka gudaha u makhaayadaha, matxafyada, iyo in ka badan.
Kuu ogolaanayaa offline dajinta ee map isticmaalka aan la xiriira xogta.
Hababka aragtida Multiple.
*** Qaababka qaarkood waxa keliya oo laga helo dalalka xadidan.
Download Google Maps (Maps) ee Android ka Google Play >> ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=en )
Google Maps ka dhigaysa in ay si degdeg ah si aad u ku siin navigation si ay u meel aad dooneyso inaad tagto. Si kastaba ha ahaatee, sida caadiga ah, waxaad u baahan tahay inuu ka soo leexdo shabagga ku saabsan telefoonka Android ama miiska ka hor inta la isticmaalayo. Taas ayaa ka dhigaysa ka xanibayo marka aad leedahay ma WiFi ama network laga heli karaa, ama marka xawaaraha internet-ka waa mid aad gaabis ah.
Xaaladdan oo kale, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad kala soo bixi Maps Google oo u isticmaali offline. Qaybtan, waxaan inta badan aad u muujiyaan sida loo sameeyo.
Waxaa jira laba siyaabood oo ay u isticmaalaan meel ka mid ah offline map-ka: Jidka 1. Waxaad tagtaa Menu> Samee offline heli karo. Xulista deegaanka ayaa ka muuqan doona shaashada kaaga. Way 2. Tag Maps> My Places> offline> New offline map. Wada hadal A ka muuqan doontaa telefoonka ama kiniin screen Android meesha aad ku qor karaan gobolka ama magaalada magac-tusaale ahaan Paris - xusho map-ka.
Si aad u soo dejisan meel, aad noqanayaa karo iyo Mozilla khariiradda gudahood xulista meesha ka dibna badbaadiyo doorashada.
Fiiro Gaar ah: Waxa jira 14 maalmood oo wakhtiga xaddidan ee offline maps soo bixi a.
Ka sokow Google Maps, waxaa tahay barnaamijyadooda khariidado kale oo badan oo aad u. Halkan, waxaan ku qor si fiican barnaamijyadooda 5 maps kuwaas oo caan ku ah astaamaha. Waxaad ka heli kartaa guudmar ku saabsan kuwa barnaamijyadooda ka shaxda hoose.
Version baahan yahay OS
1. Waze GPS bulshada maps & traffics 26 MB Free Android 2.2 iyo ilaa 4.6 / 5
2. Map Factor: GPS Navigation 9.7 MB Free Android 2.3 iyo ilaa 4.4 / 5
3. OsmAnd Maps & Navigation 25 MB Free / 8.10 $ Android 2.1 iyo ilaa 4.5 / 5
GPS 4. BackCountry Navigator TOPO Kala duwan yahay qalabka Free / 11,99 Kala duwan yahay qalabka 4.5 / 5
5. GPS Navigation & Maps by Sygic 47 MB Free Android 2.1 iyo ilaa 4.2 / 5
1. Waze Social GPS Maps & Traffic
Waa app ah isku xira bulshada la navigation GPS. In eray, waa kaliya ah app cabsi badan map Android u dajinta. Iyadoo app this, inaad hesho macluumaadka ku saabsan isbitaallada, dugsiyada, booliiska, dukaamada iyo wax badan oo dheeraad ah. Sidoo kale waxay muujinaysaa in saxmada baabuurtu, joogsiyada gaadiidka, meelaha baabuurta la dhigto iyo warbixino waxtar leh. Waxaad ka heli kartaa meel kasta oo user ee ay eegayaan ay avatar. Waxa kale oo aad sii joogo la xiriiri kartaa Facebook dhex app this. Waa mid ka mid ah barnaamijyadooda gaadiidka iyo navigation ku salaysan bulshada ee dunida ugu weyn.
Gaadiidka Real-time & Macluumaad wadada.
Tus qaylodhaan, oo ay ku jiraan khataraha, shilal, xiritaanka wadada, dabin booliska, iyo in ka badan.
Leexo-by-jeedo navigation la hage cod.
Maps Live, si joogto ah saxar iyo updated by Waze tifaftirayaasha map bulshada.
Si toos ah Faroole la markii wax qaldamaan ee wadada.
Baro dalal noqnoqda aad, jidadka ka doorteen iyo sidoo kale saacada.
Raadi shidaal jaban, wadada aad.
Ku dar xiriiro sida aad saaxiibo on Waze.
Eeg ETA saaxiibada 'marka aad wadid gaari si ay meel isku mid ah.
Meesha aad & ETA dir updates automatic.
Mid ka mid ah tubada xidhmaan dhacdooyinka Facebook & Calendar.
Fiiqaya nidaamka inay fuulaan safafka ee bulshada sida aad gacan ka info wadada.
Download Waze Social GPS Maps & Traffic ka Google Play Store >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze&hl=en
2. Map Factor: GPS Navigation
Waxay u muuqataa in ay sida barnaamijyadooda kale maps Android ee internet-ka, laakiin qaar ka mid ah muuqaalada ka dhigay gaarka ah & hanti dadka kale. Waxa ay ku siinaysaa digniin la maqli karo marka user habab kamaradaha xawaaraha kasta. Oo waxay leedahay hab navigation 3D GPS iyo sidoo kale hab 2D caadi ah waxaa ku jira sidoo kale. Maalinta qaabab / habeenkii beddelaan qorsheyaasha midabka waayo, maalintii ama habeenkii waqti wadida. Astaamahani waa u app gaar ah oo aan shaki ku sameeyo.
Waxaad siisaa digniin la maqli karo marka ay u dhawaanayaan kamaradaha xawaaraha.
Auto Map qoqobada
Sahlo si loo badbaadiyo goobta doonayo in xusuusta qalab Android.
Door in ay qorshaynta wadada albaabka.
2D / 3D Maps offline.
Siiyaan navigation cod oo ku qoran luqado kala duwan.
Download Map Factor: GPS Navigation ka Google Play >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapfactor.navigator&hl=en
3. OsmAnd Maps & Navigation
OsmAnd loola jeedaa galaya Automated Navigation Tilmaamaha. Waa navigation GPS kale app jeedin-by-jeedo. Wuxuu ku siinayaa toos ah dib-u-routing haddii aad laga daayo wadada. Hawlaha ugu muhiimsan ee ay maamusho karaa iyada oo aan internet, si aad u ha ka welwelina aan la isticmaalin maps waqtiga oo dhan. Waxa kale oo uu leeyahay hanuun cod & muujiyaan karaan aragtida satellite ah maps. Astaamahani waa ka dhigay this app masterpiece ah.
Iswada aragtida xidhiidh maalin / habeenkii.
Bandhigay xadka xawaaraha Optional, oo ku xusuusinayna arimahan.
Ikhtiyaar xawaaraha ku tiirsan map zooming.
La wadaag goobta si aad saaxiibo aad ka heli karto.
Keydso meelaha ugu muhiimsan sida Favorites.
Waxay bixisaa hanuun cod.
Badan oo ku saabsan OsmAnd Maps & Navigation ka baro Google Play >>
GPS 4. BackCountry Navigator TOPO
Waxay leedahay version tijaabo ah iyo sidoo kale version ka buuxo. Xadka of version maxkamad waa 21 maalmood. Waxay noqon kartaa mid aad u anfacaya u guutadii dibadda. Waxay leedahay maps badda. Waxaa aad u faa'iido badan iyaga oo jecel in ay tagaan tug in. Waxa kale oo la isticmaali karaa offline.
Miyuu Marine maps.
Pre soo bixi maps Jooloojiyadda.
GPS hab dhibic.
Waxay bixisaa Isticmaalka waypoints GPS ka GPX ama faylasha KML.
Ku qor wadataa kuu gaar ah adiga oo isticmaalaya longitude / loolka.
Badan oo ku saabsan BackCountry Navigator TOPO GPS ka baro Google Play >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crittermap.backcountrynavigator.license
5. GPS Navigation & Maps by Sygic
Mid ka mid ah ugu wanaagsan ee Chine map offline Adduun & cad waxaa la isticmaali karaa online sidoo kale. App Tani waa heysta rikoor ah, kaasu waa kan ugu soo bixi offline wadada app navigation GPS adduunka ee Google Play. Waxay leedahay ururinta weyn ee maps. In ka badan 160+ maps bixi karo waxaa loo isticmaali karaa offlines. Waxay bixisaa Kulanka Xiisaha Leh ee navigation GPS hanuun haadka firfircoon. Mar kasta oo aad ka jaftaa in map-ka, waxay ku tusi doonaa faahfaahin ku saabsan goobta.
Magaalooyinka 3D ee khariidadaha, muuqaal qabow.
Voice hanuuniyey nidaamka jeedin-by-jeedo navigation.
Hadal Magacyada Street in ay diiradda saaraan wadada.
Saddex Waddooyin kale oo uu ka soo xusho.
Sii digniin ku turnings fiiqan, kamaradaha xawaaraha, wadada-blocks.
Download khariidado u offline navigation dibadda.
Download GPS Navigation & Maps by Sygic ka Google Play >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura&hl=en
Waxaa jira metric tons & codsiyada ee Play Google Store. Waa arrin aad u adag in la doorto oo keliya 6 iyaga ka. Laakiin waxaan isku dayay ugu fiican si ay kuu siiyaan liiska barnaamijyadooda 6 navigation taas oo aanu rajaynaynaa in ay noqon doontaa waxtar aad u. Hadda, waxaa la gaaray waqtigii aad si aad u hubiso Chine, kuwaas oo ka soo baxay & si ay u tagaan meel walba oo aad rabto in aad. Maxaa yeelay, hadda aad leedahay qaar ka mid ah qalabka oo idinku hanuunin jidka oo dhan iyada oo loo marayo.
Part4.Download/install/uninstall/Share/Export Google Maps iyo Alternative Apps in hal meel ah
In ay qayb ka ee kor ku xusan, waxaan la wadaago hogaanka 6 maps Android inay ka soo dejisan. Hadda, aad rabto in laga yaabo in ay ka soo dejisan iyo kuwa rakibi ah ee aad taleefan Android ama kiniin ah, ama iyaga la Facebook iyo Twitter saaxiibo aad la wadaagto. Si aad u samee, Waxaan ku talinaynaa in tababare dhan-in-mid Android aad u. Waa Wondershare MobileGo for Android (Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Waxa aad bixisaa si ay Google helitaanka fudud Play Store in ay si toos ah u soo bixi maps doonayo si aad u telefoonka Android ama kiniin. Markaas, aad u maareyn karo computer effortlessly.
Tallaabada 1. Download Windows ama Mac version of Wondershare MobileGo for Android kombiyuutarka. Tallaabada 2. Isku telefoonka Android ama kiniin in kombiyuutarka la cable USB ah. Haddii aad tahay qof user Windows ah, aad xitaa ku xidhi kartaa telefoonka Android ama kiniin via WiFi. Tallaabada 3. Ugu geeska hoose ee bidixda, guji Google Play App. Buuxi maps doonayo in aad sanduuqa raadinta. Ka dib markii adakaanayso in maps bogga duuban, guji rakib si ay u rakibi ah ee aad taleefan Android ama kiniin. Tallaabada 4. On galeeysid bidix ee MobileGo for Android, guji Apps. Markaas, waxaad bilaabi kartaa inaad la wadaagto, dhoofinta, uninstall, iyo u arkaan Chine ee khariidado iyo kuwa kale.
Siyaabo Best baaq loo diro koox la Android ama iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan fariimaha qoraalka si ay u New Android
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Motorola, car,
> Resource > Android > Top 6 Maps Apps u Android inay Waxaad qaado meel kasta oo aad doonaysaa